vendredi, 16 septembre 2016 12:18
Zandarimariam-pirenena : Handray mpianatra 1.200 ho an’ny andiany faha-73
Hatao ny 17 sy 18 desambra 2016 eny anivon’ny faritra misy vondro-tobim-pileovan’ny Zandarimariam-pirenena manerana ny nosy ny dingana voalohany amin’ny fifaninanana hidirana ho mpianatra Zandary andiany faha-73 taona 2016-2017. 980 horaisina avy amin’ny mpiadina sivily sy miaramila lehilahy, 120 avy amin’ireo mpiadina vehivavy ary 100 avy amin’ireo mpiadina voamarina fa kamboty sy vady navelan’ireo Zandary maty nandritra ny fanatanterahana ny asa voabaiko ary miaramila nahavita na mbola am-panatanterahana fanompoam-pirenena eto anivon’ ny Zandarimaria.
jeudi, 15 septembre 2016 22:56
Ambodisaina Toamasina : Tovolahy 12 taona mipetra-drery hita faty nihantona tao an-tranony
Vonoan’olona sa famonoan-tena ? Tovolahikely vao 12 taona no hita faty nihantona tao an-tranony, ao Tsarahonenana – Ambodisaina, Kaominina Toamasina Suburbaine, Distrika Toamasina II, androany atoandro. Mipetra-drery izy noho ny fianarana, fa avy any ambanivolon’i Toamasina II. Mamatsy azy ara-tsakafo sy ireo fitaovana ilainy amin’ny fianarany ny ray aman-dreniny. Nanokatra fanadihadiana manodidina ity raharaha ity ny mpitandro ny filaminana misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny heloka be vava.
Page 183 sur 265